अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प को उदय संगै यसरी अन्त्य हुन सक्छ तपाइको डिभी पारेर अमेरिका जाने सपना! – ZoomNP
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प को उदय संगै यसरी अन्त्य हुन सक्छ तपाइको डिभी पारेर अमेरिका जाने सपना! प्रकाशित मिति: शुक्रवार, कार्तिक २६, २०७३ समय - ३:४९:४४ २६ कात्तिक, आप्रवासी कानुनका अधिवक्ता डिल्ली भट्टका अनुसार गैरकानुनी एवं स्थल मार्गबाट अमेरिका भित्रिने नेपाली आप्रवासीहरुमाथि ट्रम्प प्रशासन कडा हुन सक्ने छ । त्यसैगरी सामाजिक नीतिमा सरकारको हस्तक्षेपको वकालत गर्ने रिपब्लिकन र ट्रम्प प्रशासनलले आप्रवासी लक्षित सामाजिक कार्यक्रमहरु पनि कटौति गर्न सक्छ ।
विशेषतः कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई अनुदारवादीहरुले तिरस्कार गर्दे आएका छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने डिभीको कार्यक्रमको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ । २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रि तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टिटिभले डिभि कार्यक्रम बन्द गर्ने बिल पास गरेको थियो । तर डेमोक्र्याट बहुमत रहेको सिनेटले त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।
अधिवक्ता भट्टका अनुसार डीभि कार्यक्रम एवं परिवासरका सदस्यकोे भिसा कोटाको खारेजीका लागि हाउसमा बिल दर्ता छ । अनुदार कांग्रेस एवं ट्रम्प प्रशासनले यसको खारेजी गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।कान्तिपुरमा खवर छ।